DIFFENBACHIA UBAXA - WAXYEELLADA AY U GEYSAN KARTO QOF MARKII UU KU KORAY GURIGA, FARA BADAN IYO RAAXEYSIGA QURUXDA QALAAD - SOOSAARKA DALAGGA
Daryeelka Guriga ee Dieffenbachia: faa'idooyinka iyo faa'iido darrida dhirta qalaad
Thanks to Botanist Heinrich Short, kuwaas oo baabtiisay ubax ee magaca beerta beerta ee Imperson Botanical Garden of Vienna, Joseph Dieffenbach, Diffenbachia (-Dieffenbachia lat).
Geedku wuxuu badiyaa bakhaarrada guriga ee ugu horeysa ee aragtida quruxda leh: quruxda sare, xooggan, caleemo dhalaalaya.
Dieffenbachia waxaa loo tixgeliyaa inay tahay qurxinta qolka. Laakiin ka hor inta aan loo wareejin geedkaan guriga, waxaa lagu talinayaa in la ogaado dhammaan "rabshad" iyo "miisaan".
Iyada oo Diffenbachia la xidhiidho dhowr jeer, mararka qaarkood wax aan macquul ahayn. Waxaa loo tixgeliyaa "ubax of celibacy" oo aan laguma talin in ay soo iibsato gabdhaha aan guursan, si aanay u cabsiin kantaroolayaasha guriga.
Waxaa sidoo kale loo yaqaan "ubaxyada kali ah", oo loo malaynayo inay ka badbaado guriga guriga.
Si kastaba ha noqotee, haddii Dieffenbachia si lama filaan ah u ubaxday, taas oo marar dhif ah ku dhacda guriga, markaa tani waa calaamad wanaagsan, wanaagsan iyo nabadgelyo ayaa imaan doonta qoyskaaga.
Laakiin waxaas oo dhan ma aha wax ka badan nacaybka iyo in la rumaysto ama aan aaminsanayn calaamadahaas waa arrin shakhsiyeed oo kasta.
Dieffenbachia waa faa'iido aad u faa'iido leh, maadaama ay tahay mid ka mid ah dhirta yaryar ee yaryar ee soo saari kara xeryahooda kala duwan, sida formaldehyde, phenol, benzene. Dhamaan xayawaankan sunta ah ee aan helno gurigeena.
Badanaa xitaa ma ogaanno, isku day inaad sameysid gurigaaga mid leh raaxo iyo qurux, helitaanka waraaqaha wanaagsan, muraayadaha casriga ah, laminate, linoleum, waxaanu buuxinnaa sunta sunta ah, taas oo ay ku kala duwan yihiin dhammaan qurxintan, sababtoo ah soo-saarayaasha ayaa ka welwelaya maal-gashi maanta, laakiin ma aha jawi bey'adeed. alaabada la soo saaray.
Dieffenbachia si fiican ayuu u qoyaa hawada qolka, uumi saareeya qoyaanka dusha sare ee caleemaha ballaaran, sidaas awgeedna ka caawiya inuu yareeyo boodhka iyo samaynta hawada nadiifisa.
Phytoncides oo qarsoodi ah waxay la dagaallantaa bakteeriyada iyo jeermiska, gaar ahaan staphylococci, jeermiska hawada.
Hawada ayaa sidoo kale si fiican loo nadiifiyaa: Anthurium, Ficus Benjamin Kinki, Tuberiyo Peperomiya, Hoya Carnoza, Deciduous Begonia, Dracaena Fragrant (Frahrans), Dieffenbachia Sawiray iyo qaar kale.
Dieffenbachia waxay ku qanacsan tahay daryeelka wanaagsan markaad guriga ku kortay iyo inaad naftaada daryeesho, iyo sida aad u mahadsan tahay, waxay naadineysaa tamar wanaagsan oo hagaajiya samaqabka dadka ku nool qol isku mid ah.
Sawirada hoose ee aad ku qanci kartid muuqaalka guusha ee Dieffenbachia:
Laakiin Dieffenbachia waxay leedahay "goynta".
Dieffenbachia miyuu ku sumoobaa oo waxyeelo u geysan karaa bini'aadamka? Sidee dadka xasaasiyadeedu uga jawaabaan? Miyuu ammaan u yahay carruurta yaryar iyo xayawaanka raba? Kuwani waa su'aalaha ugu muhiimsan ee soo baxa marka Dieffenbachia ka muuqato guriga.
Ubaxa ma aha mid sumow leh, laakiin casiirka caanaha qarsoomay marka jirridda la gooyey ama caleemaha la jebiyey waxaa ku jira enzymes halis ah alkaloid. Sidaa darteed, waxaa la aaminsan yahay in Dieffenbachia waa warshad sun ah.
MUHIIM! Casiirka, maqaarka ku dhacaya, waxay keeni kartaa gubasho maqaarka, cuncun, dermatitis. Hadaad ku dhufatey xuubka xuubka, wax gubasho daran iyo barar. Kontaroolka indhaha ayaa keeni kara aragti ku-meel-gaar ah.
Ubax wuxuu u faafiyaa asliga ah iyo gooynka dhirta, goynta taas oo cabitaankani yahay mid aan ammaan ahayn, sidaas darteed dhammaan nadaafadda geedka waa in lagu fuliyaa gacmo gashi.
Ubaxa waxaa loo tixgeliyaa waxyeelada xasaasiyadda, sidoo kale, sida hore loo soo sheegey, Dieffenbachia ayaa hawada ku qosli karta waxayna yaraynaysaa ciidda, iyo waxa ka fiicnaan kara hawo nadiif ah dadka qaba xasaasiyad. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in aad iska ilaaliso xiriirka tooska ah ee geedka, sida casiirka la sii daayo marka jirridda ama caleenta la jaray waxay keeni kartaa falceliska maqaarka ee xasaasiyadda.
GANAAXYADA! Miyuu dieffenbachia khatar ugu yahay dadka? Ubaxa wuxuu halis u yahay caruurta yaryar iyo xayawaanka rabaayadda ah. Soodhaha dhirta waxay sababi kartaa xanuunada mindhicirka ee ku dhaca carruurta. Xitaa haddii ilmuhu uu qoyaan qoyaan ka soo baxa dusha sare ee Diffenbachia, isla markiiba biyo raaci.
Juice Dieffenbachia dhimasho xayawaanka, gaar ahaan bisadaha iyo shimbiraha. Caleenta cagaaran ee ubaxa waxay soo jiidataa iyaga, taas oo keenaysa rabitaan ah in ay cunaan cagaarka cusub, laakiin cuntadan ayaa laga yaabaa inay ugu dambeysay.
Sidaa daraadeed, warshadu waa in laga soocaa si toos ah xayawaankaaga xayawaankaaga marna ha ku gelin xannaanada.
Haddii Dieffenbachia ay waxyeello u geyso dadka - jawaabtu waa "hub" hubaal - waxay ku habboon tahay beeraalayaasha ubaxa kuwaas oo go'aansada in ay dhirta dhirta kulul ku sameeyaan magaca "Dieffenbachia" ee gurigooda, sababtoo ah waxay ka faa'iido badan tahay waxyeellada caafimaadka waxaa loo yareeyn karaa ugu yaraan, isagoo haysta macluumaadka lagama maarmaanka ah ee ku saabsan faa'iidada iyo khasaaraha ah ee quruxdadan quruxda leh ee qurxoon.
Gacaliye qaali ah! Ka tag faallooyinkaaga ku saabsan faa'iidooyinka iyo waxyeelada Dieffenbachia marka korriinka iyo daryeelka guriga.